Maroantsetra-Mananara Avaratra : mirongatra ny fambolena lavanila anaty ala arovana (NewsMada) | AEMW
Maroantsetra-Mananara Avaratra : mirongatra ny fambolena lavanila anaty ala arovana (NewsMada)
Miova ny fomba ratsy! Nangingina ny trafika andramena any Mananara Avaratra, Maroantsetra, Antanambe. Nahenoana feo farany ny septambra 2015, mikasika ny fikasana hamindra tahiry andramena. Ankehitriny, hafa indray ny fanimbana ataon’ny olona any an-toerana. Midangana ny vidin’ny lavanila (100.000 Ar- 150.000 Ar ny kilao) any Maroantsetra sy ny manodidina, ka roboka mamboly avokoa ny olona. Voatery manapotika ny ala izy ireo satria tery ny tany. Voalaza koa fa tsara ny vokatra lavanila voajanahary anaty ala, miohatra amin’ny ambolena mahazatra, satria ambony ny tahan’ny vanila ao anatiny.
Fomba iray hamaritana tany koa ny fambolena anaty ala, tsy mandaitra intsony ny fanentanana sy ny fiarovana ny ala, tsy afaka manao na inona na inona ny VOI sy ny fikambanana miaro ny tontolo iainana.
Ripaka ny voamboana
Mampidi-bola betsaka ny mponina ny vidin’ny lavanila miohatra amin’ny fihariana hafa. Tsy azo ampiharina ny lalàna mifehy ny faritra arovana (Coap). Maivana ny sazy ampiharina amin’ireo mpandika lalàna, araka ny fahitan’ny mpikambana ao amin’ny VOI. Tsy mahafehy ny asany intsony izy ireo, sady matahotra ny hifandona amin’ny mponina.
Ankoatra ny fambolena lavanila, mitohy koa ny fikapana hazo sarobidy fanao fanaka toy ny voambona mena. Efa mihalany tamingana sy mihavitsy izy ireny, ary misy efa nikatona ny toeram-pandrafetana sasany, toy ny any Mananara Avaratra. Nilaza koa ireo VOI fa misy manampahefana mpitandro filaminana maka ireny hazo ireny ihany koa. Tsy mahatohitra azy ireo ny VOI sy ny tangalamena.
← 12 aogositra : nanamarika ny androny ny tanora eran-tany (NewsMada)
Fitateram-bahoaka : tsy manan-tsafidy ny mpandeha amin’ireo taxi-be (NewsMada) →